Wasiirka Warfaafinta DKM ee Soomaaliya ayaa galabta Daboolka ka qaday in Guutooyinka ka tirsan Ciidamadda ittobiya in soo galeen qabsadeen Gobaladda Baay iyo Bakool
Wasiirka Warfaafinta DKM ee Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday in Guutooyin ka tirsan Ciidamadda Itoobiya ay soo galeen, qabsadeena gobolada bay iyo bakool ee dalka Soomaaliya.
Mudane Sakariye Maxamud Xaaji cabdi oo galabta xarunta Madaxtooyadda ee Magaaladdan Muqdisho ku qabtay shir-jaraaid,wuxuuna ku caddeeyay in Ciidankaasi Itoobiyaanka sahankoodu uu soo gaaray Degmadda Buurhakaba,iyadoo uu sheegay in Ciidamadasi ay Xayiraad ku soo rogeen qalabka Isgaarsiinta ee Deggaanadaasi.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa shegay in Dowladda Itoobiya ay qorsheysatay in weerar dhinacyo badan leh oo dhowr qeybood u qeybsama ku soo kala bixiso Magaalooyinka Kismaayo,Marka ,Baraawe,Muqdisho ,Balidoogle,B/weyne iyo Garoowe, iyadoo ku dooneyso in si xoog ah Shacbiga soomaaliyeed ugu qasabto inay maamulaan Keligood-Taliyayaal ay heeryadoodii iska tuureen.
“Itoobiya markii ay aragtay in laga adkaaday Kooxihii ay taageeri jirtay ay goosatay in ay Dagaalka iyada soo gasho, weerarkana waa mid aanay geedna ugu soo gaban”sidaasi waxaa yiri Wasiirka Warfaafinta DKM Mudane sakariya Maxamud Xaaji Cabdi, wuxuuna guud ahaan Shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo uu joogo gudaha iyo dibadda in ay iska difaacaan Gardaradda Caddowga.
Wasiirka sidoo kale waxuu Wasiirku Besha Calamka guud ahan, gaar ahaan qaramadda Midoobay,Ururka Midowga Afrika (OAU),Ururka IGAD,Ururka Jaamacadda carabta,kan Islaamka iyo Midowga Yurub inay wax ka qabtaan Duulaanka gardaradda ah ee Itoobiya ay ku soo qaaday Geyiga soomaaliyeed.